Friday, 18 Nov, 2016 1:37 PM
३ मंसिर । नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा एउटा अप्रत्यासित घटना घट्यो, त्यो पनि यूद्ध स्तरमा । वि.सं २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म नेपाली जनताले नजिकबाट हतियार सहितका युद्धका खबरहरु सुनिरहन्थे । कहिले जिल्ला सदरमुकाम कब्जा त, कहिले आर्मी व्यारेकमाथि हमला । सशस्त्र संघर्षका बेला माओवादी छापामारहरुले रातारात जिल्ला सदरमुकाममा हमला गर्थे र उज्यालो नहुँदै आफ्नो इलाकातिर फर्किहाल्थे । भोलिपल्टदेखि त्यसको प्रभावले सिंहदरवार देखी देशैभरि तरंग याउँथ्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कार्तिक ३ गते बुधबार बेलुकी सिंहदरबारभित्रै त्यस्तै तरंग ल्याउनेखालको घटना भयो, जहाँ बन्दुकको प्रयोग गरिएको थिएन, राइफल पट्कीएका थिएनन, बम पट्कीएका थिएन । त्यहाँ त केवल कलमको प्रयोग गरिएको थियो । यद्यपि यसका कर्ता चाँहि उनै जनसेनाका पूर्वकमाण्डरहरु थिए । झण्डै भण्डै छापामारयुद्धकै झल्को दिने शैलीमा सो दिन साँझ अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको ३ घण्टासम्म न त सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डले सुइँको पाए, न त नेपाल फर्किदै गरेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले । पूर्वलडाकु कमाण्डरहरुको पहलकदमीमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाईसमेत पूर्व जानकारी नदिई संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम विगतको जिल्ला सदरकुकाम आक्रमण भन्दा कम देखिएन । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको उक्त महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक थिए पूर्व डिभिजन कमाण्डर तथा सांसद महेन्द्रबहादुर शाही (प्रज्वल) । उनले लिएको पहलकदमीले अहिले नेपालको मुख्य प्रसाशनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि देशका चोक, तथा चिया पसलहरुमा उनको चर्चा हुन थालेको छ । उनको कामको जताततै प्रसंसा भइरहेको छ । आखिर को हुन् प्रस्तावक महेन्द्रबहादुर शाही ? किन उनले यस्तो पहलकदमी लिए ? यी र यस्तै विषय खोतल्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीका बारेमा मोटिभेट न्यूजका अध्यक्ष शोभराज बरालले केही शब्द खर्चेका छन् । प्रस्तुत छ शाहीको विगत र युद्ध कथा ।
कर्णाली अञ्चलको कान्छो जिल्ला कालिकोटको नानिकोट गाविसमा जन्मेका हुन् शाही । दुर्गम कालिकोट, त्यसमा पनि सँधै सुख्खा रहने नानिकोटमा जन्मेका उनी पूर्व प्रमुख पञ्चका छोरा हुन् । उनका बुवा पञ्च भएपनि अन्याय अत्याचारको विरुद्धमै लड्थे, गाउँमा ठालुका विरुद्धमा उनका बुवा संधैभरि धावा बोल्थे । अन्याय र अत्याचारमा परेकाहरुलाई सेवा गर्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म मानेर सेवा गर्ने, उनका बुवाको उनी दुई वर्षको हुँदा नै अप्रत्यासित निधन भयो । उनले बुवाको अनुहार राम्रोसँग देख्न पनि पाएनन् । उनी टुहुरा भए, उनकी आमा विधुवा । उनका बुवा सँधै गरिब दुःखीको पक्षमा बोल्थे, उनीहरुकै पक्षमा काम गर्थे । त्यो देखेर शोषक सामान्तीहरु इश्र्या गर्थे । बुवाको मृत्यु पछि निमुखा जनताको पक्षमा बोलेका कारण आमा र उनले धेरै दुःख पाए । उनका बुवाले जनताको सेवा गरेकै निउँमा उनीहरुले सजाए पाए । गाउँका शोषक सामन्तीहरुले उनी र उनकी आमालाई राम्रोसँग खान र बस्न समेत दिएनन् । बिस्तारै बिस्तारै महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सामान्तीहरुको यस्तो व्यवहार अपच्य हुन थाल्यो । यसले उनको मनमा सानै देखि विद्रोही भावना उत्पन्न भयो । सामान्तीहरुको विरुद्धमा लड्ने एउटा संस्थाको खोजी गर्न थाले । एउटा विश्वासिलो पार्टी उनलाई आवश्यक थियो । उनले स्कुलमा शिक्षकबाट सामान्य कुराकानी सुन्थे, मसालको बारेमा गाँइगुइँ कुरा चल्दै थियो । नेपालमा उक्त पार्टीले शोषक सामान्तीका विरुद्ध युद्ध लड्दैछ भन्ने कुराको सँुइ स्कुलबाटै पाए । स्कुलका शिक्षकले पनि उनलाई धेरै कुराको जानकारी दिए ।
शिक्षकहरुको सल्लाह अनुसार उनले २०४८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए । पार्टी सदस्यता लिएपछि उनी अर्धभूमिगत रुपमा गोप्य सैन्य तालिममा सहभागी हुँदै युद्धको तयारीमा जुट्न थाले । कतिबेला कहाँ गएर युद्ध लडौं भनेर रातो रगत तातेका बेलामा २०५२ सालमा जब माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात ग¥यो, तब उनमा खुशीको सीमा नै रहेन । २०५२ सालबाटै जनयुद्धमा होमिएका उनी पार्टीको संगठन र छापामारमा समानान्तर भूमिका निर्वाह गर्न थाले । कर्णाली अञ्चलमा पहिलो पटक छापामारको स्थापना भएदेखिनै उनले पार्टी र सेनामा समानान्तर भूमिका खेल्न थाले । पछि उनी कालिकोट जिल्लाको सैन्य इन्चार्ज भएर जिल्लामा जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व गरे । उनी युद्धमोर्चामा आफैं सहभागी हुन्थे । नेतृत्व गर्न देखि लड्नसम्म दोहोरो भूमिकाको निर्वाह गर्ने गरेका शाहीले संसदमा पनि योजना बनाए र अडाडि बढे ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएदेखि नै सेनामा आवद्ध भएका शाही कर्णाली अञ्चलको पहिलो सेनाको भूमिकाबाट भूमिगत जीवनको सुरुवात गरे । सुरुमा पाँचजनाको सैन्य टिममा उनी एक सदस्य थिए स्थापना हुँदाका दिनहरुमा । त्यसको केही समय पछि नै उनले कालिकोट जिल्लाको सैन्य इन्चार्जको भूमिका पाए । आफूले पाएको भूमिकालाई पार्टीमा अवसरको रुपमा लिने शाहीले त्यसपछिका विभिन्न मोर्चा हुँदै पार्टीको मध्य तथा सुदूुरपश्चिममा हुने जुनसुकै कारवाहीको पनि नेतृत्व गरे । पश्चिम नेपालमा बुटवलदेखि दार्चुलासम्म हुने जुनसुकै कारवाहीमा उनको नै कमाण्ड हुन्थ्यो । सेनाको हरेक फर्मेसनमा कमाण्डरको भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएका थिए शाही । सुरुमा वार्ड कमाण्डर, स्क्वाड कमाण्डर, प्लाटुन कमाण्डर, कम्पनी कमाण्डर, बटालियन कमाण्डर, बिग्रेड कमाण्डर हुँदै डिभिजन कमाण्डर सम्मको नेतृत्व गर्न सफल भएका शाहीले नेपाली सेनामा समायोजन बेलामा हुँदा सम्मानजनक पद नभएपछि पार्टीको मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए ।
उनले लडेको पहिलो युद्ध थियो, कालीकोट शान्तिघाटको पोदमारा आक्रमण । त्यहाँ लड्न जाँदा उनको तर्फबाट एउटा कमाण्ड र अर्को एउटा कमाण्ड गरी दुई टिम युद्धमा सहभागी भएको थियो । कर्णाली अञ्चलकै पहिलो फौजी आक्रमणले कर्णालीमा मात्र हैन, भेरी र सेती अञ्चलमा पनि त्यसले ठुलै तहल्का मच्चायो । माओबादी सेनाको तर्फबाट केही कार्यकर्ता सामान्य घाइते भएपनि सरकार तर्फबाट तीन जनाको ज्यान गयो र दर्जनांै घाइते भए । पहिलो पटककै युद्धमा सोचेभन्दा राम्रो सफलता पाएपछि उनलाई झन् प्रेरणा मिल्यो । अझ लड्ने साहस बढेर आयो । पोदमाराको युद्धले सबैलाई साहस दिलायो । उनीहरु लड्न झन् प्रेरित भए । पोदमारामा लड्न जाँदा उनीहरुसंग हतियार थिएन, भँगारुको लठ्ठी लिएर पूर्ण आत्मबल सहित युद्धमा होमिएका छापामारहरुले फर्किँदा एउटा राइफल, एउटा पेस्तोल सहित धेरै जिलेटिनहरु बरामद गरेर फर्किए । त्यस्तै उनले लडेको अन्तिम युद्ध थियो, कालिकोटकै पिली माथिको हमला । माओवादीकालमै उनी सहभागी भएर लडेको सबैभन्दा सफल कारवाही पनि पिली नै थियो । संयोग भनौं वा नियती पहिलो आक्रमण पनि उनले कालिकोटमै लडेका थिए भने अन्तिम पनि उनको लागि कालिकोट नै बन्यो । पहिलो लडाइमा पनि उनी एउटा सेनाको कमाण्ड गरेका थिए भने पिलीको घटनामा पनि उनले नै जनमुक्ति सेनाको कमाण्ड गरेका थिए । पिलीमा समयले साथ दिएकाले सफल युद्धको अवतरण गर्न सजिलो भएको शाहीको भनाइ छ ।